Flightsgbọ elu dị elu site na ụgbọ elu, zụta tiketi na ọnụahịa kachasị mma! ?
Chọta ọnụahịa kachasị mma na ụgbọ elu yana nkwa niile ekele anyị dị ọnụ ala ụgbọ elu search engine.
Nnyocha Ugbo ala
Mana enwere nhọrọ ndị ọzọ na ịntanetị, yabụ anyị na-enye gị ohere ịnweta ọchụchọ ụgbọ elu na ebe nrụọrụ weebụ tụnyere:
Ebibi: Ekele maka igwe nchọta ihe a anyị nwere ike ịchọta ụgbọ elu na ọnụahịa dị mma yana nkwa zuru oke. Pịa ebe a
Rumbo: Nchọpụta ụlọ ọrụ ama ama ama na-enye gị ngwa ọrụ iji nweta ụgbọ elu dị ọnụ ala. Pịa ebe a.
Ọkachamara: Otu n’ime igwe nchọta iji mee ihe na aha kacha mma maka ịchọta ọnụ ala dị ọnụ ala. Ọ bụrụ n'ịchọrọ ịhụ otu ọ si arụ ọrụ ị ga - eme ya Pịa ebe a.
Lufthansa, a German ụgbọ elu na nke bụ ndị kasị ibu na Europe. Na weebụsaịtị ya ị nwere ike ịchọta ụgbọ elu kachasị mma n'ime nnukwu onyinye ya. Pịa ebe a.
eDreams, otu n'ime ụlọ ọrụ njem njem kachasị ukwuu n'ụwa, na-enye ụgbọ elu dịgasị iche iche na ọnụahịa kacha mma. Detuo ụgbọ elu gị na ha na-abanye ebe a.
Mgbe obula ubochi ezumike ma obu ezumike di nso, ayi adabakariri na ihe ayi wezuga onwe ayi. Kedu ụzọ ka mma karịa ịmara ebe ndị ọzọ. Ọ bụrụ na ọtụtụ afọ gara aga, anyị dị umengwụ, n'ihi na anyị ga-eme ogologo njem ọtụtụ ụbọchị, taa nke anaghị eme ọzọ. N'ihi ụgbọelu ahụ, anyị ga-anọ ebe anyị na-aga n'oge na-adịghị anya. Ọ bụrụ na nnukwu uru a ka anyị gbakwunye ụgbọ ala dị ala na anyị nwere ike ịchọta na weebụ, anyị ga-enwerịrị akụkụ nke ezumike anyị ahaziri.
Ndụmọdụ kachasị elu maka ịchọta ụgbọ elu dị ọnụ ala
Na-agbanwe agbanwe: Otu n'ime nhọrọ kachasị mma mgbe ịchọta nchọta ụgbọ elu azụmahịa, bụ mgbe anyị na-edeghị ụbọchị a kara aka. Nke ahụ bụ, anyị niile maara na oge dị elu metụtara ọnwa Ọgọstị na ezumike mba. Yabụ, ọ bụrụ n 'ọchichọ ị nwere ike ịgbapụ n'èzí nke ha, mgbe ahụ n'ezie ị ga-echekwa ọtụtụ karịa ka ị chere na tiketi ụgbọ elu gị.
Tiketi iche iche: Mgbe ụfọdụ, akwụkwọ tiketi backlaghachi na ihu abụghị azịza kacha mma. Anyị ga-enweta ego mgbe anyị debere tiketi iche iche. N'ezie, na nke mbụ, ị ga-ele anya nke ọma, n'ihi na ọ bụghị ụlọ ọrụ niile nwere aghụghọ a.
Ihe akpịrịkpa: Ọ bụ ezie na nkwụsịtụ na njem Ha nwere ike bụrụ nnukwu nsogbu, n’okwu a, ha nwedịrị ike ịbụ nzọpụta anyị. Nke a bụ n'ihi na ọnụahịa ya belatara nke ukwuu.
Oge awa: Obi abụọ adịghị ya, oge ndị ahụ nwekwara ike imetụta akpa anyị. Ọ bụrụ n ’ịnọghị ọsọ ọsọ maka otu ụbọchị, n’ezie oge ahụ agaghị abụ nsogbu. Yabụ, ịnwere ike idobe nke gị ọnụ ala ụgbọ elu ma ọ bụrụ na ị họrọ nnọọ ihe mbụ n’ụtụtụ ma ọ bụ n’abalị. Mgbe ụfọdụ ọ na - eme na ọnụahịa dị ntakịrị ala. Kwesịrị nnọọ ịlele ya!
Jenụwarị, Febụwarị na Nọvemba ga-abụ ọnụ ala ọnwa iji mee njem. Yabụ, ị nwere ike ịga na-ele ụbọchị ha oge niile ma dozie oge ahụ. N'ezie, ọ bụrụ na ị nwere ezumike ụbọchị, ịnwere ike ịgbanwe obere oge ezumike ahụ ị bu n'uche.
Etu esi ede akwụkwọ ụgbọ elu na ntanetị
Detuo ụgbọ elu na ntanetị, Ọ bụ otu ọrụ nke onye ọ bụla nwere ike ịrụ, ọbụlagodi na enweghị ọtụtụ echiche banyere ịntanetị. Na mgbakwunye, ịnwere ike ịchekwa ndị na-emechi ọnụ, ichere na usoro ndị ọzọ. Don't cheghị na ọ bara uru?
Nke mbụ, ihe kachasị mma anyị nwere ike ime bụ ịga maka a onye na-acho ụgbọ elu dị ka ndị anyị hapụụrụ gị na mmalite nke isiokwu a. N'ebe ahụ, anyị nwere ike ịhọrọ ụbọchị na ebe anyị chọrọ ịga na anyị ga-enweta usoro nhọrọ, nyere iwu na ọnụahịa ha na ụlọ ọrụ ụgbọ elu. Ọrụ dị mfe anyị ga-enwe n’ihu n’ime sekọnd.
Dị ka engines ọchụchọ ị nwere ike iji Skyscanner na Rumbo ma ọ bụ Destinia, n'etiti ndị ọzọ. Ha niile ga-enyere gị aka ọnụahịa kachasị mma nke ụlọ ọrụ ndị ahụ kacha mara amara. In nọ na mma aka !.
Ozugbo anyi choputara, ihe omumu nke imata na amalite kedu mgbe anyị ga-ede akwụkwọ. Dịka anyị na-eme atụmatụ ezumike, anyị enweghị ike ịbịa bata. Mba, n’ihi na anyị kwesiri ịhazigharị ọnụahịa ahụ ntakịrị. Iji mee nke a, ihe ị ga-amata bụ na, dị ka usoro izugbe, ihe dị ka izu asaa tupu ọnụahịa tiketi ga-adị ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ 10% dị ọnụ ala. N'ezie, ọ bụrụ na anyị nọ n'oké ọsọ ọsọ, ị ga-amararịrị na tiketi na otu ụbọchị ịpụ nwere ike ịbawanye na ọnụahịa ruo 30% karịa.
Ozugbo iwere ụzọ isi chọọ, ịhọrọ ma họrọ ebe ị na-aga. Ugbu a ọ fọdụrụ iji mee ndoputa n'onwe ya. Ozugbo mere, ha ga-ezitere gị email nkwenye na mail na i nyere. Nọmba tiketi gị na koodu ndoputa ga-egosi ebe ahụ.
Kedu uru ndị dị na ntinye akwụkwọ ụgbọ elu n'ịntanetị?
Anyị maara na ha dị ọtụtụ uru nke inwe ike ide akwụkwọ ụgbọ elu n'ịntanetị. Obi abụọ adịghị ya, nkasi obi bụ ihe ga-eso anyị mgbe niile. Ọ bụghị otu ihe ị ga-aga n'ụlọ ọrụ wee nọrọ otu ụbọchị ụtụtụ karịa ịnọdụ ala na sofa n'ụlọ. N'ezie, na mgbakwunye na nke ahụ, anyị nwere ndị ọzọ a ga-ekwupụta.
Ozi: N'ezie, ozi dị ọtụtụ karịa. Nke a bụ n'ihi na ekele maka njin ọchụchọ ị ga-enwe ike jiri ya tụnyere ụlọ ọrụ dị iche iche, yana inwe obi uto ndi ozo na ihe niile ichoro.
Enweghị usoro oge: Echegbula ma ọ bụrụ na ị nọrọ ụbọchị niile na-arụ ọrụ na mgbe ị na-abata, na njem njem emechila. Iku ume, zuru ike obere, ma gbanye kọmpụta ahụ. N’ebe ahụ ka ị ga-ahụ ihe niile ị na-achọ. I nwere ike idetuo ma ọ bụ nyochaa ya n’echi ya ma ọ bụrụ n’ịchọrọ ịlele ọhụụ.
ahịa: Dị ka anyị na-ekwu, ihe na-echegbu anyị mgbe niile bụ ahịa. N'okwu a, a gaghị enwe ndị nnọchiteanya ma anyị nwere ike izute ndị ahụ oge niile karịa onyinye bara uru. N'ezie, cheta na ị ga-ejide n'aka ọnụahịa ikpeazụ, ozugbo agbakwunyela ụgwọ niile kwekọrọ. N'agbanyeghị nke ahụ, ọ ga-adị ọnụ ala karịa n'ịntanetị.
Ebe ndi ozo
Ọ bụrụ na ịchọrọ gaa LondonMgbe ahụ, ị ​​ga-amata na iji nweta ụgbọ elu dị ọnụ ala, ị ga-edebe ndoputa gị ihe dị ka izu asaa tupu njem ahụ. Na nke a, ị nwere ike ịchekwa ihe dịka 20% nke ọnụahịa ahụ. N'ezie, maka nke a, anyị na-adụ gị ọdụ mgbe niile ka ị malite ile anya ozugbo enwere ike yana karịa ihe niile, na ị jiri ya tụnyere. Njem ụgbọ elu kachasị dị ọnụ ala bụ na Mee na Septemba.
Ọ bụrụ na ịhọrọla mmekọrịta ịhụnanya, mgbe ahụ enwere ike Paris bụ ebe kachasị mma ị ga-aga. Ebe ị ga-achọpụta ebe mara mma. Ya mere, ka ị na-echeta ha mgbe niile ma ọ bụghị, n'ihi na ọ bụ ụgbọ elu dị oke ọnụ, ị nwere ike ịmalite ịme ndoputa gị izu 10 tupu njem gị. Ọnwa kachasị mma iji hụ Paris bụ ọnwa Septemba na Ọktọba.
Ọnụ ala ụgbọ elu na Rome
Ọ bụrụ na ịchọrọ gaa leta romeGa-ede akwụkwọ tiketi ụgbọ elu gị otu ọnwa na ọkara tupu oge eruo. N'ụzọ dị otú a, ị ga-ahụ ọnụahịa dị ọnụ ala. Ọzọkwa, cheta na Mee na June bụ ọnwa zuru oke, na-achọ ihe dị ala.
Ọnọdụ akụ na ụba na Madrid
Chọta a ụgbọ elu na Madrid ọ bụ ihe zuru oke ma dịkwa mfe. Ọdụ ụgbọelu niile jikọtara ya. Yabụ, n'ezie ị ga-enwe ike ịchọpụta ọtụtụ na n'oge dị iche iche. Ọ kachasị mma ịhapụ ịnọ oge na ụbọchị dị ka Fraịde ma ọ bụ Mọnde n'ihi na ọnụahịa ga-arị elu.
La Barcelona ọ dịkwa nke ọma ejikọrọ. Ha abụọ nwere ụgbọ elu mba na nke mba. N’ihi ya, ịgagharị na ya abụghị nsogbu. Oge ụfọdụ ị ga - ahụ ụfọdụ njem na ebe ha ga - akwụsị, mana ọ na - adị mma mgbe niile iji ohere ahụ lee ma ọ bụrụ na anyị nwere ike ịchekwa euro ole na ole. Họrọ oge mgbe ntakịrị mbanye na ị ga - ahụ otu ọ dị ọnụ ala karịa ka ị chere.